धार्मिक Archives - Page2of 45 - Nepal News, News from Nepal, Online News from Nepal, Nepali News, Political, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Credit, Vehicle, Bank, Entertainment, Nepali Movie, Songs, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, Nepali Filmi News, Poems, Business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale
गीतामा भगवान श्रीकृष्णले पिपललाई आफ्नो एक रुप बताएका छन् । यसै कारण यो मान्यता छ कि पिपलको नियमित पूजा गर्नाले दरिद्रता भाग्छ । सुख, ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ । त्यसैले पिपलको पूजा गर्नु राम्रो हुन्छ भनिएको छ । हामी भने पिपललाई भगवान् बिष्णुको रुपमा पुजा गर्ने गर्छौ।थाहापाई राख्नुहोस् केही त्यस्ता उपायहरू : जुन दिन पिपलको पूजा…..
करीब २ हजार वर्ष लगाएर बनाइएको(ग्रेट वाल) देखेरै थाहा हुन्छ चिनियाँहरु प्रचीन कालदेखि नै मेहनती थिए । पछिल्लो समय विकास निर्माणमा असम्भव झैं लाग्ने संरचनाहरु बनाएर संसारलाई चकित बनाइ रहेको छ । यस्तै चिनियाँको मेहनतले बनेको एक प्राचीन मन्दिर पनि संसारलाई चकित बनाउने खालको छ । एउटा पाइला खाख्ने ठाउँ समेत नभएको भीरमा टाँसेर बनाइएको…..
खासगरी मानिसलाई सुन्दर बनाउन अनुहारका अंगहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर समुन्द्र शास्त्रका अनुसार अनुहारका अंगहरुको सौन्दर्यजनक मात्र नभएर अरु पनि विभिन्न महत्व छन् । त्यस्तै महत्वपूर्ण अंग हो चिउँडो । मानिसका स्वभाव, गुण अवगुण थाहा पाउन उसको चिउँडो हेरे पुग्ने समुन्द्र शास्त्रको दावी छ । लामो चिउँडोः जुन ब्यक्तिको चिउँडो लाम्चो आकारको हुन्छ त्यस्ता ब्यक्तिमा…..
कुन्डलीमा हुने गणहरुबाट थाहा पाउनुहोस आफ्नो भविष्य
ज्योतिष शास्त्रमा गणको बारेमा चर्चा गरिएको छ । गण तीन प्रकारका हुन्छन् । १) देव गण, २) राक्षस गण र ३) मनुष्य गण । ज्योतिष शास्त्रमा यी गणहरुको प्रयोग कसरि गरिन्छ त ? विशेष गरेर विवाह तथा सामुहिक कामकाज गर्दा फाप अफाप के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि यसको विचार गरिन्छ । विवाहको लागि केटा…..
Page2of 1 « Previous 1234… 45 Next »